FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA BORGI DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary miteraka alika Borgi Dog
Alika mifangaro mifangaro Border Collie / Welsh Corgi
'Ity i Lizzy, Borgi (sisintany Border Collie / Pembroke Corgi) 5 taona. Alika mahafinaritra izy! Nahazo azy tamin'ny faha-4 volana isika. Tiany daholo na ny olombelona na ny biby hafa. Ny zavatra tena tiany dia i Tucker, ny lakranganay Doxi / Pekapoo kely 4 taona. Lizzy dia manana toetra milamina kokoa an'ny Corgi, tsy dia 'be atao' toy ny Border Collie. Alika mahafinaritra izy na any ivelany na ao anatiny. Raha tsy noho ny nandatsahany azy (tena 'palitao mitsoka' toa ny Corgis!) Dia izy no alika lavorary indrindra eto an-tany :-) '
Ny alika Borgi dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Border Collie ary ny Welsh Corgi (Pembroke na Cardigan). Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Ity no lakandranonay Border Collie / Pembroke Welsh Corgi amin'ny maha alika kely kely 4 volana. Tena mamy izy ary manana toetra mahafinaritra. Tena sariaka amin'ny zavatra hitany izy. Satria samy ao anaty vondrona mpiompy ny karazany roa, dia hita fa tsara ity lakroa ity. Lizzy manana tongotra kely sy fohy toy ny Corgi, nefa manana rambony lava toa ny dadany, ny Border Collie. Ny sofin'i Lizzy dia mirona amin'ny fivadibadihana, fa matetika dia ho hitanao izy miaraka amina sofina iray miakatra toy ny Corgi. Ho porofon'ny toetrany marani-tsaina sy marani-tsaina, roa andro monja no nijanonanay tany an-trano! Novidinay tamin'ny fianakaviana iray nipetraka tamin'ny toeram-piompiana mitaingin-tsoavaly, omby, akoho ary zaza telo izahay, saingy toa tsy nanana olana tamin'ny fametahana ny tranonay. Tiany ny matory sy milalao eo amin'ny farafarantsika ary naka ny ondana tiany - landy iray, tamin'izay! Indraindray ny fiampitana karazany roa dia mety ho lasa ratsy, saingy miaraka amin'i Lizzy, hita fa ny toetra tsara rehetra ananan'ireto karazana manan-tsaina ireto dia nanjary! '
'Corky no alika hybrid Corgi / Border Collie 8 taona. Mavitrika tokoa izy, na dia 8 taona aza, nefa mbola manome fotoana hanaovana snuggling. Heverinay fa toa amboahaolo izy. Ny fialamboliny ankafiziny dia ny fangotrahana, ny fatoriana manoloana ny fatana fandoroana, ny fanenjehana ny kamio sy ny fitsakoana ny kilalao mihetsiketsika. '
Stoli the Borgi amin'ny faha-3 taonany— 'Novidinay i Stoli ho solon'ny alika malalan'ny reniko, a Corgi / McNab nodimandry, toy ny fanomezana Krismasy an'i Neny. Saingy nivadika ho hafa be izy! Faly be izy sy mifaly amin'ny fotoana rehetra ary tiany ny milalao loto amin'ny alika be! Izy koa dia mpiorina resaka mahafinaritra, satria manaraka ny lafiny Corgi amin'ny halavany izy fa ny lafiny Collie kosa miloko. Mihomehy fotsiny ny ankamaroan'ny olona raha mahita azy ny volony marevaka toa tsy manan-tongotra izy! '
Lisitry ny alika Cardigan Welsh Corgi mifangaro
3 volana Alemaina alika kely mpiandry ondry
asehoy bulldog anglisy aho
sary mifangaro jack russell boston terrier